10 Faaido Oo Basashu Timaha U Leedahay | Maan Kaab
Home Caafimaadka 10 Faaido Oo Basashu Timaha U Leedahay
10 Faaido Oo Basashu Timaha U Leedahay
Basasha (onion) oo sida caadiga ah aan ku naqaan inay ka mid tahay cunnooyinka jikada inago u adeegsana macaanaynta dhadhanka cunada ayaa laga yaabaa inay leedahay faaidooyin caafimaad oon la soo koobi karin.
1. Basashu way hodan ku tahay maadooyinka la dagaallama fangaska iyo bakteeriyada, waxayna timahaaga ka ilaalin kartaa caabuqyada hoos dhiga koritaanka timahaaga, waxayna hagaajin karaan koritaanka timaha.
2. Basashu waxay qani ku tahay maadada sulphur, maadadan waxay ka hortagta jababka iyo khafiifinta timaha. Maadada sulphur waxay muhiim u tahay dib-u-soo-nooleynta timaha dhintay.
3. basasha waxay yaraysaa timaha iyadoo dib u soo celin karto nafaqada ka dhamaatay timaha.
4. Basasha waxay ka hortagta viruska iyo bacteria gasho madaxa waxayna ka caawisaa timaha ka hortaga infectionk ku dhaco maqaarka madaxa, infectionka ku dhaco maqaarka madaxa wuxuu hoos u dhiga koritaanka timaha isago aakhirka sababi kara in timuhu ka dhamaadan madaxa.
5. Basasha waxa ku jiro maado awood badan oo loo yaqaan “Antioxidants” maadadan waxay ka hortagta inay timuhu cirooban.
6. Markii si joogto ah loo isticmaalo basasha waxay kor uqaadi doonta korniinka timaha, madowga timaha iyo dhalaal.
akhri:10 Wax Oo Dadka Faqiirka ah Sameeyan
7. Basasha waxay ka hortagta mustaqbalka in madaxa infection ku dhaco kaaso wiiqi lahaa korniinka timaha.
8. Basasha iyo saliid saytuunta la isku daray marki si joogta loo isticmaalo waxay kor u qaadan muga timaha ama cufnaanta halka tin ay leedahay iyago yaraynaya khafiifinta timaha.
9. Basashu waxay mada ka dhowrta agoolka timaha galo markii si asbuucle ah loo isticmaalo, basasha waxay sare u qaada wareega dhiiga ee madaxa.
10. Khubaradu waxay sheegtay hadii mudo 6 bilood ah si joogta ah loo wado in isbadal weyn ku iman doono dhererka iyo muuqaalka timaha.
Si aad u isticmaasho basasha si saxan raac qodobadan:
Soo qaado xabad ama labo xabo oo basala.
Googoo basasha kuna shub shiidka wax lagu shiido.
Basashu waxay leedahay ur xun hadaad doonayso inaad yarayso urta basasha waxad ku darsan kartaa saliid saytuun iyo malab.
Daawo Muuqaalkan Si Aad Uga Bogoto
Previous article10 Caado Oo Dadka Faqiirka ah Sameeyan
Next articleDadka Ugu Taajirsan Caalamka 2021